Nkpọrọ ụkwụ na ntan; Olee otú iji chọpụta ma lụọ Ghost spam Iji Google
Spam na-ewere ọnọdụ mgbe a natara data a na-achọghị. Ụdị spam a dị abụọ. Spam spam na Spam spam. Ịchụpụ okporo ụzọ spam na-ejide onwe gị, ma ị ga - achọpụta ụdị ụdị malware dị, nke mbụ.
Crawlers bụ ụdị spam nke na-eleta saịtị gị n'ezie site n'izipụ bọtịnụ nke na-eleghara iwu anya dị ka ndị na robots.txt - was kostet ein lagerraum. Mgbe ha si na saịtị ahụ pụta, a na-ahapụ ụzọ nke nleta ziri ezi na nchịkọta Google Analytics, ma ọ dị mwute na ọ bụ adịgboroja. Ha siri nnọọ ike ịchọpụta n'ihi na ha na-ezo n'azụ ndị ntinye aka na ezigbo ebe nrụọrụ weebụ yana URL yiri.
Frank Abagnale, Onye Na-ahụ Maka Ndị Nlekọta Ọrụ nke Semalt , na-akọrọ ya ahụmahụ ọ ga - esi merie spam mọbụ ọma.
Ngwurugwu bụ spam kachasị. N'adịghị ka crawlers, ha enweghị njikọ ọ bụla na saịtị gị, kama nke ahụ, ha na-esi ísì n'ime nchịkọta nchịkọta Google gị site na nsụgharị Trojan site na nchịkọta nchịkọta Google Analytics gị. Ha na-esi na koodu gị site na ị nweta ha site na ndị ọzọ ma ọ bụ koodu mmechi na-emeghị eme (UA-XXXXXX-Y). Ebe ọ bụ na ha anaghị abanye na saịtị gị, ha na-eji Usoro Usoro iji gbanwee data Google Analytics gị.
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-ajụkarị ihe mere ị ga-eji gbanahụ spam mọbụ. Spam nwere mmetụta nhụsianya na nchịkọta nke ebe nrụọrụ weebụ ndị ọrụ. Ha na-emebi ikikere internet nke onye ọrụ site n'ịbawanye ibu nke ihe nkesa. Ọ bụ ezie na ha anaghị etinye aka na njikarịcha Search Engine, njikwa data akọwaghị njirimara nke onye ọrụ n'ezie. N'ikpeazụ, a ga-emetụta njikarịcha Nchọgharị Search gị na ọkwa ịchọta gị ga-ada n'ihi mkpebi na-ezighị ezi na mkpebi ikpe na-ezighị ezi.
N'agbanyeghi nke a, imerụ ihe dị mkpa dịka mmekọ, sessions na ntụgharị agbanwe ndị data ha na-agafe na njedebe nke ụdịdị ahụ, agaghị ewe iwe Search Engine Research Page (SERP). Nanị, ọ bụ ezie na Google Analytics bụ ọrụ nyocha nyocha, ọ bụghị saịtị ọ bụla na-eji Google Analytics. Nke a na-akọwa ihe data si na nchịkọta Google agaghị emetụta ọkwa site na saịtị Google.
E nwere ụzọ ị ga-esi jiri spam ghost jiri Google Analytics. Ụzọ ndị a gụnyere nzọụkwụ na-eji otu nhicha megide spam mmụọ..Ọ na-atụ aro ya maka na onye ọrụ naanị mmelite na-agbakwụnye koodu mgbakwunye ọhụrụ. Ma ọ bụghị ya, a chọrọ obere nlekọta site n'aka onye ọrụ. N'ikpeazụ, ịchọta aha njakịrị aha ọjọọ na-enye aka n'ịdebe spam mọbụ ịbanye na nchịkọta Google Analytics.
Nzọụkwụ ndị ahụ bụ:
Mbụ , gaa na nchịkọta Google (ebe ị na-ele okporo ụzọ weebụ ) ma chọpụta taabụ akụkọ. N'okpuru aka ekpe, chọta 'Ntị' wee pịa ya. Pịgharịa site na aka ekpe ma chọpụta 'Technology' ma pịa ya. Mụbaa na teknụzụ ma họrọ 'Network'. A Network Report ga-apụta na n'elu ya, pịa 'Hostname'. Mgbe nke a gasịrị, ndepụta aha nnabata ga-apụta gụnyere ndị eji spam. Ị nwere ike depụta aha nnabata aha. Dịka ọmụmaatụ, yourmaindomain.com ma ọ bụ seosydney.com.
Nke abụọ , gụnyere aha nnabata niile ma mepụta okwu mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, seosydney \_ .com | yourmaindomain.com.
Nke atọ , mepụta nhazi nhazi. Pịa na taabụ 'Admin' na aka ekpe aka nri na ala (hụ na ị nwere echiche na-enweghị nzacha). Pịa 'All Filters' wee pịa bọtịnụ + + Add Filter. N'okpuru 'Filter type' click 'Custom'. Nke a na-emepụta nhazi nhazi ọhụrụ. Mepụta nzacha aha. Họrọ iji tinye 'Hostname' mgbe ịlele 'Gụnyere' afụ. Detuo okwu gị n'ime igbe 'Mgbanwe nyocha'.
N'ikpeazụ , gaa na ntinye nzacha ma họrọ 'Master' wee wee "Tinye" na nhọpụta ahọrọ. Họrọ 'Chekwa' ma tinye nchoputa gị.
Otú ọ dị, ọ dị mma na oge ọ bụla ị gbakwunye koodu ncheta na ọrụ ọ bụla, ọ kachasị mma ịgbakwunye koodu a na njedebe nke nza. Nke a na-enye aka n'iwepụ ihe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu nke spam spam.